Tsingerintaona faha-45 an'ny Suriname
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'i Suriname » Tsingerintaona faha-45 an'ny Suriname
Desambra 21, 2020
Nankalazaina tamin'ny fomba mihaja tamin'ny 45 Novambra ny tsingerintaona faha-25 an'ny fahaleovantenan'i Surinameth 2020. Ny fetin'ny fahaleovan-tena (Onafhankelijkheidsdag) dia nanamarihana ny fetim-pirenena isan-taona
Tamin'ny 25 Novambrath 1975, Suriname dia nahazo ny fahaleovan-tena tamin'ny fanjakan'ny Netherlands. Tao anatin'ny volana nialoha ny fahaleovantena dia efa ho ny ampahatelon'ny mponina ao Suriname no nifindra monina tany Pays-Bas.
Ny filoham-pirenena voalohany dia i Johan Ferrier, ny governora teo aloha, ary i Henck Arron no praiminisitra.
Ireto manaraka ireto dia HEVITRA MISONGOTRA iray momba ny fivoriana ampahibemaso ZOOM notontosaina tato ho ato (22/11/2020) momba ny lohahevitra “Ny 45th Tsingerintaona nahaterahan'i Suriname. ” Ny fivoriana Pan-Caribbean dia nampiantrano ny Ivon-kolontsaina Indo-Caribbean (ICC). Izy io dia notarihin'i Varsha Ramrattan amd notarihan'i Dr. Kirtie Algoe, samy vehivavy avy any Suriname.
Ireo mpandahateny dia ANGELIC ALIHUSAIN-DEL CASTILHO, masoivohon'i Suriname teo aloha tany Indonezia ary filohan'ny antoko Demokratika Alternative91 (DA'91); DR. DEW SHARMAN, dokotera mpitsabo ary ny lefitra lefitry ny Antenimieram-pirenena / Parliament of Suriname; ary DR STEVEN DEBIPERSAD, dokotera mpitsabo ary mpampianatra kabary ara-toekarena ao amin'ny Oniversite Anton de Kam of Suriname.
Hoy i CASTILHO:
“Ny tena ifantohan'i Suriname dia ny Netherlands, na dia niditra tao amin'ny CARICOM [Community Caribbean] aza i Suriname tamin'ny 1995.
Nandritra ny taona maro nisian'ny fahaleovantenantsika dia tsy mbola nisy ny fifandonana ara-poko. Na izany aza, mijanona ho zavatra tokony hotandremantsika mavitrika izy io. Ny fampiraisana ara-poko an'i Suriname dia tokony ho tanjontsika mandritra ny 45 taona manaraka.
Tao anatin'izay 45 taona lasa izay, iray ihany ny andrim-panjakana - ny fitsarana - izay mijanona ho mahatanty sy mahatohitra ny fitantanana ratsy, ary mbola atokisana sy hajaina.
Ny fahaleovan-tena dia dia tsy mifarana hatrizay. Aorian'ny 45 taona dia mbola manana ady ihany izahay handamina ny sisin-taninay, fa ao anatin'ny faritaninay ihany koa miaraka amin'ireo zanatany zanatany. Tsy tokony ary tsy tokony ho lovan'ny taranaka mandimby izany. Tokony hametraka fototra mafy orina isika amin'ny fitantanana tsara, demokrasia ary ny fanjakana tan-dalàna ary koa ny fampandrosoana ara-toekarena maharitra. "
Hoy i DR SHARMAN:
“Tamin'ny 1873, mpiasa Indiana tsy tonga nifindra no tonga tao Lalla Rookh ireo karana voalohany. Raha atotaly dia olona 33.000 no tonga tany Suriname izay manodidina ny 50% no niverina tany India.
Ireo olona nanapa-kevitra ny hijanona ao Suriname dia noraisina ho toy ny olom-pirenena kilasy faharoa. Na dia niasa mafy aza izy ireo hahazoana fiainana tsara kokoa, dia tsy navela hiditra ao amin'ny fiarahamonina, ohatra, tamin'ny fanilihana azy ireo ho an'ny asan'ny governemanta, sns.
Hatramin'ny nanambarana ny zon'ny mpifidy ankapobeny tamin'ny 1949, dia nisy ny fahatsiarovan-tena ho an'ny Suriname-Indiana mba handrosoana eo amin'ny fiarahamonina, ny politika sy ny fanabeazana dia tokony ho fiara lehibe roa.
Noho ny tolona ataon'izy ireo ho an'ny zon'olombelona mitovy amin'ny Afro-Suriname indrindra, ary ny fotoana mety misy, dia niforona ny antoko politika VHP. Nanjary nalaza io antoko io ary nanimba ny fifanenjanana ara-pirazanana tamin'ny alàlan'ny fampiharana ny politikam-pirahalahiana sy ny firahalahiana.
Ny tontolon'ny politika tamin'ny fiandrasana ny Fahaleovantena dia naheno ary nandrahona ireo teratany karana-karana maro izay natahotra ny firongatry ny foko toy ny nitranga tany Guyana folo taona talohan'izay. Noho ny fanamby ara-tsosialy sy ara-politika dia Suriname an'arivony maro - izay teraka indianina indrindra - no nifindra tany Pays-Bas ho an'ny ho avy sy ny fahafaha-mampianatra.
Na izany aza, nijanona tao Suriname ny olona sasany mba hanampy amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny olona manana razambe Indiana dia mamorona ampahany lehibe amin'ny fiarahamonina Suriname, na dia mety ho tsara kokoa aza ny toe-javatra.
Ny sasany amin'ireny olona ireny dia nitombo ho 400,000 XNUMX teo ho eo. Ireo izay nandeha tany Netherlands dia nanampy tamin'ny fampandrosoana an'io firenena io koa. ”
Hoy i DR DEBIPERSAD:
“Suriname dia eo amin'ny sampanan-dalana lehibe. Ao anatin'ny krizy mideza isika izao, miaraka amin'ny vinavinan'ny fitomboana ratsy 12.5% amin'ity taona ity, ary trosan'ny governemanta mihoatra ny 125% ny harin-karena faobe. Atambaro ireo valiny ireo amin'ny isa naoty CC mankany amin'ny toerana misy anao ary risika lehibe any amin'ny firenena, lasa olana lehibe ny fidirana amin'ny vola vaovao sy ny fisarihana ireo mpampiasa vola.
Ny trosa tsy maharitra notohizana niaraka tamin'ny alahelo Covid-19 dia niafara tamin'ny fihenan'ny fatoram-bolan'ny governemanta, ary efa ho 40% ny sandany. Ny volana oktobra dia fanindroany tamin'ity taona ity ny governemanta dia nangataka tamin'ny mpampindram-bola mba hanemorana ny fandoavan-ketra.
Ny teny famaranako dia eo an-dàlana ho avy izao: Voalohany indrindra dia tokony hiasa amin'ny drafitra famerenana amin'ny laoniny feno ny governemanta. Ity sori-dalan'ny fitoniana sy fitomboana maharitra ity dia tokony hofaranana ASAP.
Mitovy ihany ny maha zava-dehibe ny drafitra fitantanana trosa maharitra, indrindra satria mihoatra ny 125% ny harinkarena faobe ny trosan'ny governemanta ary mihena ny toe-karena ary mbola indramina ny fampindramam-bola hiteraka famokarana. "
Miaraka amin'ny drafitra an-trano dia tokony hotadiavina ny fanampiana avy amin'ny IMF. Nanjary nilaina io hamerenana ny fahatokisan-tena amin'ireo mpampindram-bola any ivelany; eo amin'ny lafiny vola sy ara-bola fotsiny izany.
Zava-dehibe koa ny fiaraha-miasa amin'i Etazonia, NL, F, ankoatry ny hafa, hitadiavana mpampiasa vola vahiny. Ny fanaovana risoriso dia nanalavitra ireo mpampiasa vola. Amin'ireto fandraisana andraikitra ireto dia hitombo ny tombony ampitahaina aminay. ”
Nosoratan'i Dr Kumar Mahabir
Suisse dia nanambara ny fandrarana fidirana, ny quarantine retroactive ho an'ny mpandeha avy any UK sy Afrika Atsimo
Hotely any Hawaii: nihena 70 isan-jato ny vola niditra tamin'ny Novambra